Imala Aggaaroo hanga masaraa Biyyaalessaa
Print | Email | Hits: 10532
Muummeen Ministeera Itoophiyaa haaraa Dr. Abiyyi Ahimad Oromiyaa Lixaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magalaan Aggaaroo bakka bashaashaa jedhamutti, ALI bara 1968 dhalatan. Dr. Abiyyi Abbaasaanii Obbo Ahimad Alii (abbaa Fiixaa Abbaa dhaasaa)fi haadhasaanii Aadde Tizzitaa Waldee jedhamanirraati kan dhalatan. Abbaansaanii amantaa Musiliimaa kan hordofan yoo ta’u, haatisaanii amantaa kiristaanaa hordofu. Dr. Abiyyi barnootasaanii sadarkaa 1ffaa Aggaarootti hordofan. Barnootasaanii sadarkaa 2ffaa bakka adda addaatti xumuranii diigrii jalqabaasaanii Finfinneetti, Kollejjii ‘Microlink Information Technology’ irraa ‘Computer Engineering’dhaan bara 2001 argatan. Barnoota digirii lammaffaa bara 2005tti Afrikaa Kibbaa, magaalaa Pritooriyaa keessatti kan argamu dhaabbata ‘Mashies Dynamics Cipher-ED’ irraa gosa barnootaa Kaartooloojii yookaan ogummaa ragaalee yokaan daataa gareelee lama gidduutti wal-jijjiiramu barreessuufi hiikuutiin digiriisaanii lammaffaa’aa argataniiru.
Kanamalees bara 2003tti gosa barnootaa, hoggansa cehumsaafi jijjiramaa(‘Tranformational Leadership and Change’) kan magaalaa Loondoonitti argamu Yunivarsitii Giriinwich digirii lammaffaa Maastersiin eebbifamanii jiran. Koollejjii Hoggansa Hojii Liidistaar irraas digirii lammaffaa Maastersii Bulchiinsa Biizinesii yokaan ‘MBA’ argataniiru. Barnoota digirii sadaffaa ykn Dooktarummaa ‘PHD’ isaanii immoo, Dhaabbata Qu’annoo Nageenyaafi Tika-nagaa(‘peace and security studies’), Yunivarsitii Finfinnee irraa bara darbe jechuun bara 2009 argataniiru.
Dr. Abiyyi bara 1985 miseensa raayyaa ittisaa Itiyoophiyaa kan ta’an yoo ta’u, Wallagga Lixaa keessatti leenjii waraanaa idilee fudhatanii, achumatti ramadamuudhaan dame tikaafi quunnamtii waraanaa keessaa tajaajilan. Ramaddii hojii hoomaa waraanaatiinis sadarkaa adda addaatti dirqamasaanii bahataniiru. Biyya alaatti miseensa homaa waraanaa nageenya Ruwaandaa eegsisuuf bobba’ee ture keessatti, garee naga-eegumsaa Tokkummaa Mootummootaa “UNMIR” jedhamuuf miseensa ta’anii, magaalaa Kigaaliitti tajaajila kennaniiru. Bara 1990, yeroo weerara Eertiraan Itoophiyaarratti bantetti, gurmuu ragaa-tikaa hoogganaa kan turan yoo ta’u, bara 2002tti sadarkaa Leetenaal Koloneelummaatti guddatan. Dr. Abiyyi Ahimed, Ejensii Caasaa Tika-nagaa Biyyoolessaa(INSA) bara 1999 hundeessuudhaan, hanga bara 2002tti daarektarummaan hoogganaa turaniiru. Dr. Abiyyi, ragaalee qindeessuu, walitti-dabarsuufi facaasuutti dhaabbatoota mootummaa hidhata qabaniif, miseensa boordii ta’uudhaanis tajaajilanii jilaniiru, tajaajilaas jiru.
DR. Abiyyi, bara 2002 tti daarektarummaa INSA gad-lakkisuudhaan miseensa Koree Giddu-galaa Dhaabata Dimookiraatawa Uummata Oromoo yoo ta’an bara 2005 irraa eegalee koree hoji raawwachiiftuu DhDUO ta’uun tajaajiluu irrattii argamu. Akkasumas bara 2007 irraa eegalee hanga ammaatti miseensa koree hoji raawwachiiftuu ADWUI ta’uun tajaajiiluu irratti argamu. DR.Abiyyyi hanga bara 2004tti miseensa Mana-mareefi koree hoji-raawachiistuu ADWUI ta’anii tajaajilaniiru. Filannoo bara 2002 geggeessamettis, Aggaaroodhaa filatamanii miseensa mana-maree bakka-buootaa Itiyoophiyaa tahan. Gama mootummaatin sadarkaalee adda addaatti ittigaafatamummaa garagaraatiin kan hojjataniifi hojjachaa kan jiran yeroo ta’uu, bara 2002 irraa eegalee godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo bakka bu’uun miseensa manamarii bakka bu’oota ummataa ta’uun tajaajilaniiru. Bara 2000 hanga bara 2002tti miseensa boordii Dhaabbata Raadiyoofi Televiizhinii Ityoophiyaa, bara 2001-2002tti miseensa boordii Koorporeshiinii Teleekoominikeeshiinii Itoophiyaa ta’uun hojjataniiru.
Bara 2000 -2002tti sadarka maanajarummaatiin “Ethiopia Media and Expansion, National Electronics Id System, Computer Based Data Communication System” dhaan dhaabbilee gara garaa keessaa fi “A’utomation of Banking System in Ethiopia” keessatti maanaajara ta’uun kan tajaajilan yoo ta’u, bara 2007 irraa eegalee walitti qabaa boordii intarpiraayizii daandii saffinaa, akkasumas baruma kanatti walittii qabaa boordii waldaa hojiilee ijaarsaa, diizaayinii fi suupparviizhiinii Ityoophiyaa ta’uun tajaajilaniiru. Bara 1999 irraa hanga 2002tti hundeessaafi daayreektara ‘INSA(Information Network Security Agency) ta’uun kan tajaajilan yoo ta’u, bara 2005 irraa eegalee immoo dayreektara Giddu Gala Odeeffannoo Saayinsiifi Teeknooloojii Biyyoleessaa ta’uun tajaajilaniiru. Bara 2007tti Ministira Ministeera Saayiinsiifi Teeknooloojii, bara 2008 irraa eegalee hanga xumura bara 2009tti sadarkaa ittii aanaa preezidaantiitti hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa ta’uun tajaajilaniiru. Dr Abiyyi, naannoo Jimmaatti walitti-bu’insa Musliimaafi kiristaana gidduutti ka’ee lubbbuu namaafi qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee ture dhabamsiisuufi walii-galtee waaraa fiduu keessattia qooda guddaa gumaachaniiru. Jalqaba Fulbaana bara 2010 irraa eegalee hanga dura taa’aa DhDUO ta’anii filatamanitti sadarkaa ittii aanaa preezidaantitti hogganaa Waajjira DhDUO giddu galeessaa ta’uun tajaajilaniiru. Dr. Abiyyi hoggansa jijjiiramaati. Wayita Ministeera saayinsiifi Tekinooloojii ta’anii turanitti yeroo gabaabaa keessatti hojiiwwan fakkeenyummaa qaban hedduu hojjechuun kan beekaman yoo ta’u, sadarkaa naannootti haala walfakkaatuun Sadarkaa Ittaanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Industiriifi Misooma magaalaa ta’uu wayita tajaajilanittis yeroo gabaabaa keessatti hojiilee hedduu raawwachuun jijjiirama fidaniin hawaasaafi hojjetootasaanii biratti kabajaafi jaalala horachuu danda’aniiru. Dhiyeenya kanammoo Dr.Abiyyi dura taa’aa DhDUO ta’uun tajaajiluu kan jiran yoo ta’u,. Koreen Hoji Raawwachiisaa ADWUI fi Manni Maree ADWUI dhiyeenya irra deddeebi’uun gamaggama haaromsa gadi fagoo geggeessaa tureen, hojii qaawwa bulchiinsaa guutuuf kallattii kaa’uun Dooktar Abiy Ahimad dura taa'aa addichaa godhe. Bu’uuruma kanaanis Ministeera Muummee biyyattii ta’anii manni maree bakka bu’oota ummataa Bitootessa 24 moggaafamaniiru.
Dr. Abiy Ahimad muummee ministiraa biyyattii ta’uun tajajailuuf waadaa ega seenaniin booda haasaa taasisaniin, “dogoggora keenyarraa barannee egeree biyyattiirratti waliin hojjechuun walooma Ityoophiyummaa cimaa ni uumna” jechuun dubbatan. Tokkummaafi jaalalaan rakkoo biyyattii ni hiiknas jedhaniiru. Ijaarsi sirna demokraasii waldhageettii barbaada. Ummannis mootummaadhan dhaga’amuu barbaada. Kanaaf mootummaanis ummannis waldhageettiin, biyya waliin qabnu hirmaachisummaan ijaarsa demokraasii keenya itti fufnas jedhaniiru. Mootummaan sochii fi yaada ofii ibsachuun karaa nagayaan akka ta’u ni hojjeta. Mootummaan obsuu barbaada, seera kabajuus, kabachiisunis dirqama jedhaniiru. Ummanni seerri jiraachuu qofa osoo hin taane, haqni kabajamuufii barbaada. Seerri hunda kan walqixa kabaju ta’uutu irra jiraata.
Kanarratti fooyyessa taasisuuf waliigaltee fiduuf ni hojjetama jedhanii, gaanfi Afrikaa gaaffii fi fedhii addaa keessa jira kan jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy, Ityoophiyaanonni naannichatti tokkummaa isaanii eegsisanii akkuma turan ammas sanaaf ni hojjenna jedhan.
Ityoophiyaatti tokko saamee itti badhaadhee kaan hiyyummaatti akka hin kufne herreega durii buusurraa of qusachuu qabnas jedhan. Diinagdee biyyattiirratti daldalli kallattii alaa amma yaadamu guddachuu dhabuu, idaan alaa fi qusannaan walgituu dhabuun biyyattiif rakkoolee jajjaboo turan jedhaniiru.
Ijaarsa biyyattii keessatti dargaggeessaf haalli mijataan kan uumamu ta’uu ibsanii, ga’eesaa akka tabatuufis ni hojjetama eeraniiru.Fayyadamtummaan dargaggootaa fi dubartootaa akka mirkanaa’uf ni hojjennaanis waadaa galaniiru. Kana malees paartilee siyaasaa cimsuun, ijaarsa sirna demokraasii keessatti gumaacha olaanaa akka qabaataniif akka hojjetamus waadaa galaniiru. Sirna muudamasaanii kanarratti haasawaa mana mare bakka bu’oota ummataaf dhiyeessan kanaan Paartilee dorgomtootaa dabalatee aangawoonni mootummoota biyyoota Addunyaa kanaatiin dinqisiifannaa guddaa argataniiru. Jijjiiramaafi rakkoo biyyatti mudate furuufis deggersa akka barbaachisuufi waliin akka hojjetanis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Dr. Abiyyi bultii kan qabaniifi Abbaa ijoollota durbaa sadii’iiti. Nutis Ministira Muummee DR. Abiyyiif yeroo hojii gariifi milkii hawwineerraaf. Horaa Bulaa!